Come Eseguire In Marketing Marketing Modo Efficiente: La Guida Da Semalt
Amawebhusayithi amaningi akhuphuka nsuku zonke. Kuyinselele ukuthi i-newbie iphumelele emncintiswaneni wanamuhla. Ngenxa yalokhu nezinye izizathu eziningi, ukumaketha kwe-intanethi kufanele kufike ukusiza ukuqala kokuthola ukutholakala kwe-Inthanethi, okuyintokuzoba namandla okuqhuba ibhizinisi elinenzuzo. Ngokwesibonelo, i-Search Engine Optimization (SEO) inendima okufanele idlale ekuwenzeni amawebhusayithiuthole isimo esihle online.
Ochwepheshe be-inthanethi basebenzisa amasu amaningi ukuze bakhe ukutholakala kwe-intanethi yabobrand unique futhi uqinisekise ukuthi bathola backlinks, traffic, ukuhola futhi, okubaluleke kakhulu, amakhasimende. Ngakho-ke ungayisebenzisa kanjani inthanethi kakhulu ukumaketha kwebhizinisi lakho? U-Ivan Konovalov, isazi esiholela phambili i-Semalt Amasevisi weDivaysi, uchaza imithetho yokusebenza nge-intanethi yokumaketha ngendlela efanele - grey feather fascinator.
Iphutha elikhulu abesomabhizinisi abaningi abenzayo liqala amawebhusayithi e-commerce ngenxa yomona walabo abalingani babo baphumelele. Babheka izibalo abangani babo abazenzayo futhi basheshe baqale ukuqala iwebhusayithingaphandle kokwazi okuthile okudingekayo ukuze kuzuzwe lelo phuzu lempumelelo. Ukumaketha kwe-intanethi kuyinkqubo ende, eyenza abasebenzisi ukuba izinga eliphezulu kakhulu. Ukufeza impumelelo, ukuphikelela nokubekezela yizinto ezibalulekile, kanye nokuhlukunyezwa nokusebenza kanzima ekuhlanganiseni okuhlukahlukeneizindlela zokuthengisa eziku-intanethi. Isibonelo, umkhankaso we-SEO ophumelelayo uthatha izinyanga eziyisithupha ukuqala ukuthola imiphumela ebalulekile.
Sebenzisa idatha namamethrikhi
Ukuhlaziywa kwedatha namamethrikhi kubalulekile ekuqinisekiseni ukuzinzaokuqukethwe kwakho ku-intanethi. Isibonelo, noma yiluphi uhlelo lokukhangisa noma isinyathelo sincike kuhlelo oluthile lwedatha. Ngenxa yalokho, okuqukethwe okuthileimisebenzi yokuphatha uhlelo kumele itholakale. Lawa ma-dashbhoards akusiza ukuthi ulandele inqubekelaphambili yakho kuyo yonke inqubo yokumaketha. Ngaphakathi amanye amacala, umuntu angasebenzisa ulwazi olufanele ukuze ahlaziye i-ROI yezindlela ezihlukahlukene futhi enze izinguquko ezidingekayo ukuze afinyelele umgomo womkhankaso.
Sebenzisa izindlela ezahlukene
Kungumqondo ohlakaniphile ukwandisa imikhankaso yokuthengisa inthanethi zibe iziteshi ezintsha.Imibono emisha neziteshi zandisa iklayenti lakho. Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka omunye weziteshi zokuthengisa ehluleka, uzokwazi ukwenza imalingomunye umzila. Umqondo omuhle ngoba enye yeziteshi ihluleka ekugcineni. Ingxenye yokwakha iwebhusayithi, kubalulekiledala amakhasi e-social media kuwo wonke amawebhusayithi lapho okuqukethwe okubalulekile njenge-blogs nokuthunyelwe kungafinyelela abathengi bakho kuyo yonke inethiwekhi yomphakathiamasayithi. Ukusebenzisa okuqukethwe kwevidiyo nezinye izindlela ezintsha kukusiza ukuba ubhale khona inthanethi ngezindlela eziningi. Ukuthola amakhasimende ahlukahlukeneiziteshi kusho ukuthi ibhizinisi lakho lizohlala lizinzile ngisho nalapho enye indlela iwa.
Kungenzeka ukufinyelela ezinhlobonhlobo zamakethe ngokusebenzisa ukukhangisa okululaamasu. Isibonelo, ukuthola amakhasimende kungatholakala ngokusebenzisa iziteshi eziningi ezinjengezindaba zenhlalo. Nokho, ukukhokha imali encaneukusiza umkhankaso wakho wokukhangisa uphumelele kungakusiza ukuba ukhulise ukubandakanyeka. Ngezinye izikhathi, kubalulekile ukutshala amaRandi ambalwaemkhankasweni wakho wokumaketha. Lokhu ukukhishwa kungakushiya mahhala kuya kunkulu kwezinye izici zokumaketha kwe-intanethi ngenkathi kuthuthukiswa ngakhoinqubekela phambili. Uhlu lwamawebhusayithi amahle okukhokhela izikhangiso zihlanganisa i-Google AdWords ne-social media platform Facebook.